Ogaden News Agency (ONA) – Somaalida oo laga mamnuucay inay safaaradaha Itobiya dib dambe uga shaqeeyaan
Somaalida oo laga mamnuucay inay safaaradaha Itobiya dib dambe uga shaqeeyaan
Posted by ONA Admin	/ November 17, 2011
Wariyayaasha inoogu dhex qarsoon Addisababa iyo Jigjiga ayaa warar aad u xasaasi ah inooga soo tabiya goobaha ay joogaan. Wararkii ugu dambeeyay een ka helnay ilo-wareedyadaa ayaa sheegaya in xukuumada gumaysiga Itoobiya ay si cad ugu sheegtay wakiilkooda Ogadenya Cabdi ileey inaysan dowlada Itoobiya dib dambe ugu magac-aabi doonin safiir iyo qunsul midna qof Soomaali ah.
Qoraal rasmi ah oo kasoo baxay Wasaarada Arimaha Dibadad ee Itoobiya ayaa lasoo gaadhsiiyey dabaqoodhi Ileey. Arintan ayaa ka dambaysay kadib markay is dhiibeen dhowr qunsul oo gumaysigu u soo diray dibadaha si ay tashwiish iyo kala furfur ugu sameeyaan jaaliyada xooga badan ee taageera halganka ay JWXO hurmuudka ka tahay ayna ku fashilmeen kii horay u joogay Ingiriiska Caydaruus iyo kii ugu dambeeyey ee qunsulkii Washington Mowliid Maxamed oo todobaadkii lasoo dhaafay iska dhiibay magaalada Bufalo ee cariga Maraykanka.
Arintan ayaa waxay ka mid tahay boqolaalka masuuliyiin Itoobiyaanka ah oo inta horana biilkooda iskaga ilaashada meelaha loo soo diro markay xaaladu khadhaadhaatana qaxootinimo codsada oo isku dhiiba.
Isdhiibka Mowliid ayaa yimid kadib markii looga yeedhay Addis-ababa uuna ka qaaday shaki iyo cabsi weyn, iyadoo qaar ka mid ah eheladiisuna kula taliyeen inuusan dib ugu soo noqonin Itoobiya, caruuntiisa iyo reerkiisana aabo la’aan dhigin.
Baxsadka qunsulada iyo masuuliyiinta Itoobiya ee dibadaha ayaa shaki weyn ku kala dhex abuurtay xukuumada mucangaga ah ee EPRDF iyo ciddii ay u soo dirsan lahayd ka shaqaynta safaaradaha, iyagoo ka aaminbaxay hadda cidii aan ahayn Tigree inay si daacad ah ugu shaqayaan maamulka Wayaanaha.
Ma aha Soomaalida oo kaliya masuuliyiinta Itoobiya ee aadka uga baxsada shaqooyinkii loo soo diray ama ay dibadahaba ka hayeen balse dhamaan qowmiyadaha Itoobiya ee ku hoos dulman taliska EPRDF ayaa si joogto ah magangalyo iyo qaxootinimo u weydiista wadamada ree Galbeedka markay fursad ku haboon helaan.
Waxaa la saadaalinayaa masuuliyiin kale inay iska dhiibi doonaan wadamada reer Galbeedka siduu noo sheegay wariyaheena Addisababa oo yidhi xog dheeraad ah ayaan arimahaa idinka soo siin doonaa markay kala cadaadaan.
sasama wade says:
asc. aad ayaan iddin salaamay waxa aan aad ugu faraxsanahay in ay ku hongoowday taliska wareersan ee Adis ababa dacaayadihii raqiiska ahaa ee ay soo abaabushay kuwaas oo ay u soo dhiibtay dad u dhashay reer Ogadenya si ay uga gado aduunka ay ka afduubtay wadanka Ogadenya waa farxad aan la soo koobi karin guul iyo gobanimo ONLF guul guul libintii gaadhayoo gobanima heshee